नेबिको प्रालिको नयाँ ब्रन्च बिस्कुट नेपाली बजारमा
Fri, May 24, 2019 at 12:30am
शुक्रबार, १७ फागुन २०७५,	आहाखबर	4.1K
नेबिको प्रालिको आफ्नो नयाँ उत्पादन ब्रन्च बिस्कुट देशका विभिन्न शहरहरुमा बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । नयाँ उत्पादन ब्रन्चलाई पहिलो चरणमा ठुला शहरमा सार्वजनिक गरेपछि बिस्तारै अन्य शहरहरुमा उपभोक्ताको मागलाई ध्यानमा राखेर उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । देशका ठुला शहरहरुमा सार्वजनिक भएको छोटो समयमै उपभोक्ताहरुले अत्यधिक मन पराएकाले अन्य शहरमा पनि यसले राम्रो प्रभाव पार्ने कम्पनीले बिश्वास लिएको छ । उपभोक्तालाई नयाँ स्वाद दिने क्रममा उच्च गुणस्तरको ब्रन्च बिस्कुट उत्पादन गरेको कम्पनीले बताएको छ ।
यस्तो छ ब्रन्च बिस्कुट
उत्कृष्ट र आकर्षक मेटालिक प्याकिङमा उपलब्ध बिस्कुटको तौल ९० ग्राम रहेको छ भने यसको बजार मूल्य २० रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरी विगत ५५ वर्ष अघिदेखि बिस्कुट उत्पादन गर्दै आएको यस कम्पनीले उत्पादन गरेको यो बिस्कुटमा सक्कली बटरको स्वाद राखिएको छ । यस बिस्कुटको गुणस्तर निकै उच्च किसिमको र स्वाद नरम रहेको छ । ब्रन्च बिस्कुटले कुकिजको पनि अनुभव २० रुपैयाँमै दिने भएकाले ग्राहकको मन जित्ने विश्वास कम्पनीले राखेको छ ।
नेबिको प्रालिले कोकोनट, ट्रेकर च्वाइस, थिन आरारोट, सुगर फ्रि डाइजेष्टिभलगायतका आफ्ना उत्पादनहरु उपभोक्तामाझ ल्याइरहेको छ ।
नेबिकोको ब्रन्च बिस्कुट बच्चादेखि बृद्ध सबैलाई हुने खालको रहेको जानकारी दिईएको छ । ब्रन्च बिस्कुट कम उमेरका बालकहरुलाई लक्षित गरेर बजारमा निकालिएको हो । कम्पनीको ब्राण्ड बिभाग प्रमुख (ब्रान्ड म्यानेजर) अरुण पौडेलका अनुसार यो बिस्कुटलाई धेरै खोज तथा अनुसन्धान गरेर मात्र बजारमा ल्याईएको हो । यसको प्रमुख उमेर समुहमा ८ वर्षका बालकदेखि २२ बर्षका युवा समुह रहेका छन् । आकर्षक प्याकेटमा बजारमा आएको यस बिस्कुटले आम उपभोक्ताको मन जित्नेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।
कम्पनीका ब्रान्ड म्यानेजर अरुण पौडेल यसलाई स्वदेशी स्वादमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्पादन भन्न मन पराउनुहुन्छ । पौडेलले भन्नुभयो, "ब्रन्च बिस्कुटले विदेशी बिस्कुटहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र स्वदेशी बिस्कुटमै नेपाली उपभोक्ताहरुलाई सन्तुष्टि दिन्छ ।"
हरेक वर्ष ६ नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याउने गरेको नेबिको प्रालिको ग्राहकवर्गहरुमा सकारात्मक छाप रहेको देख्न सकिन्छ ।
यसको कच्चापदार्थ पूर्णतया स्वदेशी रहेको छ तर स्वादमा रहेको फ्लेवर चाहिं विदेशी मिश्रित रहेको छ । गुणस्तर र लोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले नयाँ नयाँ स्वादका बिस्कुट आम उपभोक्ताका लागि उत्पादन गर्दै अघि बढ्ने कम्पनीको लक्ष्य छ ।
नेबिकोका अन्य उत्पादन पनि ग्राहकहरुले उत्तिकै मन पराएका पाईन्छन् । जसमध्ये रोगिहरुलाई लक्षित गरेर बजारमा ल्याइएको सुगर फ्री बिस्कुटले नेपाली बजारमा राम्रै छाप छोड्न सफल भएको छ । नेबिकोका अरु उत्पादनहरुमा कोलस्ट्रोलमुक्त बिस्कुट निकै चर्चित रहेको छ । मधुमेह भएका तथा नभएका दुवै उपभोक्ताले उपभोग गर्न मिल्ने र यसमा शारीरिक स्वास्थ्य सन्तुलनमा राख्न चाहिने पौष्टिक पदार्थ राखिएको छ ।
नेबिको प्रालि ५५ बर्षदेखि निरन्तर बिस्कुट उत्पादन गरिरहेको देशको पहिलो बिस्कुट उत्पादक संस्था हो । नेबिको प्रालिले कोकोनट, ट्रेकर च्वाइस, थिन आरारोट, सुगर फ्रि डाइजेष्टिभलगायतका आफ्ना उत्पादनहरु उपभोक्तामाझ ल्याइरहेको छ । गुणस्तरीयताको पर्यायवाची बनेको नेबिको प्रालिको उत्पादनको स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि माग उत्तिकै रहको छ ।
गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने नेबिकोले विगत धेरै समयदेखि आफ्ना ग्राहकवर्गको भावना र मागलाई सम्बोधन गर्दै आईरहेको छ । हरेक वर्ष ६ नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याउने गरेको नेबिको प्रालिको ग्राहकवर्गहरुमा सकारात्मक छाप रहेको देख्न सकिन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र गराउन नेबिकोले बेलाबखत समाजिक कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आईरहेको छ ।
अमेरिकाले हटायो केही समयका लागि हुवावेलाई प्रतिबन्ध, प्रयोगकर्तालाई कस्तो असर ?
नेपाल लाइफको चुक्ता पूँजी जीवन बीमा क्षेत्रकै सर्वाधिक, शेयरधनीलाई २५ % बोनस
भोडाफोनको नोक्सानी ७ अर्ब युरोभन्दा बढी
सामसुङको आधिकारिक सेवा केन्द्र लक्ष्मी कम्प्लेक्स् धनगढीमा
आईएमएस् ग्रुपले धुमधामसाथ मनायो आफ्नो २७ औं वार्षिकोत्सव
जनता बैंकका ग्राहकलाई बिराट मेडिकल कलेज र बिराटनगर अस्पतालमामा विशेष छूट
'हुवावे फाइब–जी सार्वजनिकीकरणमा अपराध भएको छैन'
सिभिल बैंकका ग्राहकलाई ब्लू क्रस र मेडीसिटी हस्पिटलमा उपचार गराउँदा छूट
जनता बैंक र भाटभटेनी मनी ट्रान्स्फरबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
अनलाइन सेवाले बढ्यो जापानको सोनी कम्पनीको नाफा
टिभीएस मोटरसाइकल तथा स्कूटरका डिलरहरुको भेला सम्पन्न
यूनाइटेड सिमेन्ट्सको नयाँ वर्ष अफर : कार जित्ने मौका !
टोयोटा र सफ्टबैंकले उबरमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा
प्रगतिपथमा एनटीसी : देशभर फोरजी विस्तार गर्दैै, मोबाइल सेवा सुधार्दै
यूनाइटेड सिमेन्ट्स आइएसओ ९००१: २०१५ र ९००१: २०१५ द्वारा प्रमाणित
स्मार्टडोकोको नयाँ वर्ष अफर : ७० प्रतिशतसम्म छूटको व्यवस्था
जनता बैँकद्वारा ‘सबै नेपालीको बैंक खाता’ अभियान सञ्चालन
जाजरकोटको शिवालयमा सिभिल बैंकको ७४औं शाखा
हिमालको संरक्षण तथा फोहोर संकलन गर्नका निम्ति सम्झौता
टिभिएसले ल्यायो नयाँ वर्ष २०७६ लक्षित 'सात छ हाम्रो’ अफर
​युनियन हाइड्रोको साधारण शेयर बिक्री शुरु
आईएमएस लिटिल स्माइल्सको नयाँ शोरुम सिटी सेन्टरमा
टाटा मोटर्स कन्सट्रक्सन एक्सपो काठमाडौँमा सम्पन्न
होली पर्वको अवसरमा वेलकम एडभर्टाईजिङ्गको विशेष कार्यक्रम
जनता बैंकको एटिएम धनगढीको असनपुरमा, देशभर एटिएम संख्या ९४
मेघा अस्पतालमा विशेष बिरामीलाई ५० प्रतिशत छुट
साङ्गयोङ्ग मोटर्सको शोरुम अब पोखरामा, बिभिन्न आकर्षक अफर !
​जनता बैंकको आयोजनामा दोरम्बामा ३ दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर